Doorasho la filayo inay ka dhacdo deegaanka Tigreyga ayaa aqalka sare ee Itoobiya ka horyimid… – Hagaag.com
Doorasho la filayo inay ka dhacdo deegaanka Tigreyga ayaa aqalka sare ee Itoobiya ka horyimid…
Aqalka sare ee dalkaasi Itoobiya ayaa cod buuxa uga soo horjeestay doorashada la filayo deegaanka Tigreyga iney Arbacada soo socota qabsoonto ay tahay mid dastuurka ka horimaneyso isla-markaana aan la aqbali doonin natiija kasta oo doorashadaasi ka soo baxdo.
Golaha Federeeshiinka ee dalkaasi Itoobiya oo maalinti shalay shir degdeg ah ka yeeshay amuurtan wuxuu sheegay dhaqdhaqaaqyada ka socda ismaamulka deegaanka Tigreyga uu ku doonayo doorasha ka duwan dalka intiisa kale uu deegaan ahaan iskii u qabsado ay tahay mid gabi ahaanba ka horimaneyso dastuurka dalka Itoobiya u yaalla iyo shuruucda doorashada.
Go’aannada deegaanka Tigreeda ka soo baxay ee la xiriiro doorashada iyo howlaha doorashada la xiriira dhammaantood ay yihiin kuwo ka hor imanaya dastuurka dalka.
Golaha Fedreeshinka ee dalkaasi Itoobiya oo shirka degdegga oo ay albaabbada u xirnaayeen maalinti shalay yeeshay wuxuu dhageystay warbixin ay u soo jeediyeen guddiga joogtada ee fasiraada arrimaha dastuurka.
“Arrimaha sharci darrada ah ee ka socda deegaanka Tigreyga dartii shacabka deegaankaasi iney dhibaato soo gaarto looma baahna, wixi dhib ee jirana goluhu wuxuu aaminsan yahay iney wadahadal iyo isafgarasho lagu dhammeeyo, goluhuhna wuxuu dhiirra gelinayaa dadaal kasta oo ismari waaga taagan xal looga raadinayo” ayuu yiri.
Golaha Federeeshiinka wuxuu maamulka deegaanka Tigreyga iyo xisbiga talada deegaankaasi haya ee TPLF uu ugu baaqay iney joojiyaan xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo gabood fallada ay u geysanayaan shacabka deegaankaasi ee la xidhiidha doorashada deegaankaasi uu qorsheynayo inuu si gooni ah uu u qabsado.
Doorashada guud ee dalkaasi Itoobiya ka dhici lahayd bishan Sptember ayaa dib loo dhigay kadib markii ay labada gole ee dalkaasi cod aqlabiyad ah ay ku meel mariyeen in doorashada dib loo dhigo 9 bilood ilaa iyo sanad.
Hase yeeshee, deegaanka Tigreyga ayaa markiiba ka soo horjeestay go’aankaasi isla-markaana inuu yahay go’aan dastuurka ka horimanayo doorasha u gooni ahna uu deegaan ahaan uu qabsanayo.
Sida uu qorsheynayo deegaanka Tigreyga doorasha u gaar ah ayaa waxay ka dhici doontaa Arabacada oo ku beegan 9-ka bisha September.